Beesha caalamka oo war cusub kasoo saaray kordhinta xubnaha Aqalka sare iyo go’aanadii madaxda madasha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Beesha caalamka oo war cusub kasoo saaray kordhinta xubnaha Aqalka sare iyo go’aanadii madaxda madasha
Beesha caalamka ayaa si adag uga hor-timid go’aan maalintii shalay kasoo baxay madaxda madasha qaran, kaas oo ahaa in lagu kordhiyay tirada Aqalka sare ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
War-qoraal ah oo ay soo saareen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in go’aankaasi ay soo saareen madaxda madasha qaran uu yahay mid kasoo horjeeda dastuurka KMG ee Soomaaliya.
Sidoo kale, qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in go’aanka noocaas oo kale ah ay qaadan karaan oo kaliya baarlamaanka cusub, kadib doorashada madaxda sare ee dalka.
Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin in xildhibaano kusoo baxay laaluush, awood sheegasho, tacadiyo iyo qalalaase ay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Wakiilada beesha caalamka ayaa ugu dambeyn qoraalkooda ku dalbaday in waqti kama dambeys ah loo sameeyo xilliga doorashada madaxda dalka, kahor 19-ka Janaayo oo ay golaha ammaanka ka shiri doono arrimaha Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, wakiilada beesha caalamka iyo madaxda madasha qaran ayaa u muuqda inay isku dhacsan yihiin, inkastoo qoddobo badan oo beesha caalamka ay dooneysay xilligaan u muuqda kuwa laga gudbay.